Ireo goavam-by hazo enina amin'ny ala Copenhagen | Vaovao momba ny dia
Ireo goavam-by hazo enina an'ny ala Copenhagen
Maria | | Copenhague, Danemark
Sary | Ny feo avy amin'ny rindrina
Misy toerana any Eropa misy ny majia. Eo amin'ny sisin'ny Copenhagen dia ala iray izay mbola ahitan'ireo olona goavambe. Toa an'i Odin, Thor na Loki, ireo zavaboary ireo dia ao amin'ny angano Norse ary ny artista Thomas Dambo dia te-hanao azy ireo ho zavakantony tamin'ny famoronana sary sokitra hazo tena manokana izay mifangaro tanteraka amin'ny tontolo Danoa. Mandritra ny fotoana fohy, ireo izay mitsidika an'ity toerana ity dia afaka mamela ny fisainany hivezivezy ary manonofinofy fa mandeha eo afovoan'ireo olona goavambe.
1 Ahoana no niandohan'ilay tantara?
2 Inona no hafatra raisin'ireo olona goavambe ireo?
3 Ahoana ny fomba hahitana azy ireo any anaty ala?
3.1 Teddy Friendly
3.2 Oscar ambanin'ny tetezana
3.3 Louis matory
3.5 Tilde kely
3.6 Tomasy teo an-tendrombohitra
Ahoana no niandohan'ilay tantara?
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2016 dia nanomboka namolavola ity tetikasa ity i Dambo sy ny ekipany izay teraka noho ny fahalianan'ny filankevitra eo an-toerana amin'ny famoronana zavatra hisarika ny sain'ny mpizahatany ivelan'ny afovoan-tanànan'i Copenhagen manan-tantara. Raha ny filazan'ilay mpanakanto ihany dia nangatahana tamin'ny sary sokitra tao afovoan-tanàna izy tamin'ny voalohany saingy nisalasala izy ary nisafidy ireo ala ao amin'io faritra io. Ka rehefa naharesy lahatra azy ireo izy dia nanomboka ny fananganana goavam-be enina izay naharitra enim-bolana ny asa. Tamin'ny faran'io taona io ihany dia efa nipetraka tao amin'ny fonenany ireo olona goavambe.
Inona no hafatra raisin'ireo olona goavambe ireo?
Sary | Gazety Ether
Namorona ny goavambe enina i Thomas Dambo tamin'ny alàlan'ny hazo fanodinana (fefy hazo, paleta taloha, hazo avy amin'ny trano heva taloha, sy izay rehetra azo ampiasaina) ary izay mitovy aminy azony ampiasaina. Tamin'ny asany dia tsy irery izy satria nanana ny fiaraha-miasan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao an-toerana izay mizara ny fahitan'ilay mpanakanto sy ny toe-tsain'izy ireo tia namana. Inona moa fa ireto olona goavambe enina ireto dia te hamporisika ny olona hikarakara tsara ny planeta ary hanampy amin'ny fanaparitahana ny hafatra momba ny maha-zava-dehibe ny fanodinana.
Mino i Dambo fa haharitra eo anelanelan'ny dimy ka hatramin'ny folo taona ireo olona goavambe alohan'ny hanombohany manimba. Namboarina tamin'ny fitaovana namboarina izy ireo ary hanaja ny tontolo iainana ka hatramin'ny avo indrindra amin'izy ireo, i Tilde izay metatra efatra metatra sy iray taonina sy sasany ny lanjany, dia misy tranom-borona 28 ao anatiny. Ny hafa aza lehibe kokoa aza, toa an'i Thomas izay 17 metatra ny halavany, saingy tsy miarina fa lava ny halavany.
Ahoana ny fomba hahitana azy ireo any anaty ala?
Sary | manonofinofy
Teddy Friendly, Oscar Under the Bridge, Sleeping Louis, Little Tilde, Thomas On The Mountain ary Hill Top Trine dia eo akaikin'ny tanàna toa an'i Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund ary Høje Taastrup, izay akaikin'i Copenhagen avokoa. Ny tetik'asa dia aseho ho toy ny fikarohana harena iray izay tsy maintsy hitan'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny sarintany.
Ny voalohany amin'ilay sary sokitra dia i Teddy Friendly vita amin'ny hazo namboarina, toy ireo olona goavam-be dimy hafa nataon'i Thomas Dambo ao an-drenivohitra Danemark. Ho an'ny fananganana ity sary sokitra ity, ny ekipan'i Thomas Dambo dia nahazo fanampiana avy amin'ny foibe fiofanana eo an-toerana. Ho fankasitrahana ny asany dia nomena anarana ho an'ny iray amin'ireo mpampianatra ity goavambe ity. Na eo aza ny habeny, Teddy dia toa biby goavam-be sariaka volo sy sandry lava mijoro eo am-pototry ny farihy.
Oscar ambanin'ny tetezana
Ny faharoa amin'ireo sary vongana dia i Oscar Under The Bridge vita amin'ny hazo milina fitotoana rano. Ny asa dia nomena anarana avy amin'ny mpanakanto avy any Chile izay nanampy tamin'ny tetikasan'ity sary vongana ity izay hita eo ambanin'ny tetezana anaty ala.
I Louis goavam-be dia matory any anaty ala akaikin'ny tanànan'i Rodovre, Danemark, eo afovoan'ny hazo sy ny biby. Lalina loatra ny torimason'ity zavaboary ity ka matory miaraka am-bava mivaivay, amin'izay ahafahan'ny olona miditra. Ny fananganana azy Dambo sy ny ekipany tamin'ity indray mitoraka ity dia niara-niasa tamin'ny vondrona tanora mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny fikambanana iray izay manampy ny tsy an'asa hahazo traikefa alohan'ny hidirany indray eo amin'ny tsenan'ny asa.
Sary | EterMagazine
Mijanona eo an-tampon'ny havoana kely iray any Hvidovre mipetraka ny Hill Top Trine. Iray amin'ireo mahafinaritra indrindra izany satria afaka mitsambikina eo an-tànany ilay mpitsidika ary manana fomba fijery tsara momba ny ala ary koa maka sary mahatsikaiky any. Ny sary sokitra dia nomena anarana ho an'ny iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo niasa tamin'ny iray amin'ireo goavambe miafina hafa.
Ao anatin'ny valan-javaboary manodidina ny 50 hektara sy farihy roa mifandraika, akaikin'ny tanànan'i Vallensbæk Mose dia i Little Tilde. Mba hananganana azy dia nanisa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanao asa tanana roa ao an-toerana ihany koa i Thomas Dambo izay nanome ny anarany ilay goavambe.
Tomasy teo an-tendrombohitra
Mipetraka eo an-tampon'ny havoana iray i Thomas ary tsy mijery ny tanànan'ny Albertslund. Ka na zovy na zovy mahita azy dia ho afaka mahita ny endrik'ilay faritra akaiky azy. Nomena ny anarany avy tamin'ny mpanakanto ny tenany ary hananganana azy io dia nanampy ny vondrona tanora mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny sekoly iray eo an-toerana ny ekipa, ary koa olona antitra roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Copenhague » Ireo goavam-by hazo enina an'ny ala Copenhagen
Amin'ity tolotra ity dia manorata hotely any Córdoba ary zahao ny foara
Inona no jerena ao amin'ny tanànan'ny Siena any Italia